चितवनमा खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई त्यसै छाड्दैनौं: अधिकारी - Narayanionline.com
निजामती सेवामा प्रवेशले उनको अध्ययनशील बानीलाई रोक्न सकेन खाद्य प्रविधिमा धरानबाट स्नातकोत्तर गरेपछि पुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा पनि दोस्रो डिग्री पूरा गरे । यसअघि खाद्य प्रविधि विभाग काठमाडौँमा कार्यरत अधिकारी भदौंको पहिलो हप्तामा मात्र चितवन सरुवा भएका आइपुगेका हुन् । खाद्य पदार्थको स्वच्छतामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहने उनी आफू पनि खाद्य वस्तुको उपभोगमा निकै सावधानी अपनाउने गर्छन् । फुर्सदको समयमा घुमफिर गर्न, गीत गुनगुनाउन र चर्चित पुस्तकहरु पढ्न रुचाउने खाद्य डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीसँग नारायणी अनलाइनले गरेको छ । प्रस्तुत छ वार्ताको सम्पादित अंश :
प्रश्न : चितवनमा भर्खर भर्खर सरुवा भएर आउनु भएको छ ? के छ तपाइँको नयाँ योजना ?
परिवर्तित समयमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्नमा नै मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ । जसको लागि एकातिर बजारको अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ भने अर्काेतिर उद्योगहरुको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । आम नागरिकलाई खाद्य स्वच्छताको बारेमा सूसुचित गर्ने पनि मेरो दायित्व रहने छ । यस क्षेत्रमा निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएका खाद्य ऐन–२०२३ र दाना ऐन–२०३३ को सफलरुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि मेरो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ । कानुन विपरित कार्य गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम पनि हामीले गर्ने छौं ।
प्रश्न : चितवनमा बजार अनुगमन देखावटी मात्र भयो ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?
सोही जनगुनासोलाई आत्मसाथ गर्दै अब चितवनमा खाद्य उत्पादन र वस्तुहरुबारे नियमित जसो अनुगमनलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । दुई महिनामा एउटा स्थानीय तहमा पुग्ने योजना छ । चाडवाडको समयमा अनुगमनलाई अलि बढी प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।
प्रश्न : खाद्य पदार्थमा मनपरी मिसावट गर्नेलाई के कस्तो कारबाही भएको छ ?
गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयमार्फत् विभिन्न गैरकानुनी कार्यमा १० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा ८ वटा मुद्दा दर्ताको तयारी हुँदै छ । यस्ता मुद्दाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अदालतमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । अहिले दर्ता हुन लागेका अधिकांश मुद्दाहरु दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण र उत्पादनसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रश्न : तपाइँहरुको कारबाही निष्पक्ष हुन्छ ?
अवश्य पनि हुन्छ । हामीले मुद्दा दायर गसिकेपछि त्यसको सम्पूर्ण अभिलेख मन्त्रालयमा हुन्छ । कारबाही नगरी कसैलाई पनि छाड्ने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । मुद्दाको प्रक्रियामा केही ढिला हुने अवस्था त छ तर पनि चितवनमा म आइसकेपछि समयमा नै अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रश्न : अन्त्यमा तपाइँ चितवनमा आमसर्वसाधारण नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
खुलारुपमा राखिएको र अत्यधिक रंग मिसिएको खाद्य पदार्थहरु सकभर प्रयोग नगरिदिन सबैमा अनुरोध गर्दछु । खाना प्याकेट गर्दा कागजमा पोको पार्ने गर्दा कागजको रंग खाद्यपदार्थमा सर्ने पनि गरेको छ । त्यो झनै खतरनायक हुन्छ । यस्ता अद्याध्य वस्तुहरु मिसावट भएका खाद्य पदार्थले क्यान्सर रोग समेत निम्त्याउन सक्छ ।
काम गरे बजेट अभाव हुँदैनः कृषिमन्त्री लामा
एक महिनादेखि युरिया मलको चरम अभाव
अमेरिकामा राष्ट्रपतिका लागि आज राति चुनाव हुँदै, ट्रम्प र जो बाइडेनबीच प्रतिस्पर्धा